Ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny Valentine teknolojia | Vaovao momba ny gadget
Ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny Valentine teknolojia
Araka ny ataontsika eto hatrany manampy anao amin'ireo daty fiantsenana mahaliana ireo, ary ny Andron'ny mpifankatia no iray amin'ireo fotoana mety hanomezana azy. Nanao fanangonana kely izay heverinay fa fanomezana tsy maintsy ananana izahay raha mpitia teknolojia na te hampiseho amin'ny olon-tiana ny fitiavanao azy.
Por eso Izahay dia manome anao hevitra fanomezana betsaka ho an'ny Andron'ny Mpifankatia tena teknolojia. Aza adino fa ny vokatra rehetra dia manana tombo-kase fankatoavana Ny maha-vokatra izay efa nodinihintsika taloha ary nanome valiny mahatalanjona.
1 Hatsarao amin'ny fifandraisan-davitra
2 Hanombohana amin'ny Connected Home na Smart Home
3 Multimédia sy fialamboly
Hatsarao amin'ny fifandraisan-davitra
Ny teleworking dia nanomboka nanjary ampahany amin'ny andavanandrontsika isan'andro, maro aminareo no mety tsy manana "asa" ao an-trano mifanaraka amin'ny filàna rehetra mety ilain'ny zavatra toy izany. Raha mitady zavatra mora vidy ianao dia manomboka amin'ny kitendry ODY Wireless sy kitapo totozy avy ao amin'ny Trust ianao.
Ho an'ny € 24,99 ihany dia azonao atao ny miditra amin'ny rafitra somary feno, toy ny amin'ny klavier, Manana fanalahidy 13 efa voarindra mialoha izahay ho an'ny Microsoft Office sy ny fitantanana haino aman-jery. Ankoatr'izay, ny keyboard ihany koa dia mahazaka ary ny totozy kosa tena mangina. Samy mifandray amin'ny seranan-tsambo USB iray ihany izy roa.
Kitapo kitendry sy totozy ODY avy amin'i Trust> BUY
Raha mitady zavatra Premium bebe kokoa ianao, dia mandeha mivantana amin'ny klavier tsara indrindra izay ezahantsika hatrizay hatrizay eto amin'ny tranokalanay sy ny fantsonay izahay. Miresaka momba ny Craft Logitech izahay.
Mazava fa tsy miatrika vokatra mora vidy isika, ary mety ho iray amin'ireo kitendry izay mifanaraka indrindra amin'ny tontolon'ny matihanina izay ho hitantsika eny an-tsena. Amin'izao fotoana izao dia amidy amin'ny 115,90 euro ao Amazon. Tsy misy isalasalana, tsara indrindra ny tolotra ary miteny ho azy ny kalitaon'ny vokatra.
Logitech Craft amin'ny vidiny tsara indrindra> BUY
Ny monitor dia mety ho safidy tsara hafa hikarakarana ny masontsika ary hanatsarana ny famokarana, ka Manoro hevitra ny Philips 273B9 izahay, izay iray amin'ireo farany notsapainay ary mifantoka indrindra amin'ity fizarana ity.
Philips 273B9, monitor manatsara ny fifandraisan-davitra [Fanadihadiana]
Raha heverintsika fa toy ny USB-C HUB io, izay manome vola 60W amin'ny solosaina finday ary manana ny SmartErgoBase, Toa fampiasam-bola mihoatra ny tsara izany. Sarotra ny mahita mpanara-maso hafa manana ireo toetra ireo sy ny vidiny somary antonony izay afaka mamaly ny fitakian'ny teleworking.
Monitor an'ny Philips 273B9> BUY
Hanombohana amin'ny Connected Home na Smart Home
Tsy fotoana ratsy velively ny manomboka ao amin'ny Smart Home miaraka amina andiana vokatra mifanaraka amin'ny IoT. Mazava ho azy fa amin'ity tranga ity dia mijanona mivantana any amin'ny Echo Amazon vaovao ny fijanonantsika voalohany.
Toa ahy ny fomba tsara hanombohana, satria ny Echo Dot dia toa famenon-javatra amin'io lafiny io. Ny Amazon Echo miaraka amin'ny protokol Zigbee miaraka amin'ny jiro Philips Hue sy vokatra hafa mifanaraka amin'ny Alexa afaka manamora ny fiainanao izy ireo araka ny nasehonay anao tamina iray amin'ireo horonan-tsarimihetsika mandeha ho azy ao an-trano.
Akon'ny Amazon> BUY
Ireo vokatra Energy Sistem natao ho an'ny trano an-tsaina dia niaraka taminay foana tao amin'ny tranonkalantsika ary tsy latsa-danja amin'izany bazaar izany. Ny fomba tsara indrindra dia ny fananana famantaranandro fanairana, mpandahateny ary lozisialy mahay miaraka amin'i Alexa eo amin'ny latabatray, ity no Smart Speaker Wake Up avy amin'ny marika Espaniola.
izy ny kalitaon'ny feo dia ampy hamenoana efitrano amin'ny fomba mahazatra, ny famolavolana sy ny fitaovana dia tena mahomby ary ny habetsaky ny fampiasa ampiasain'izy ireo izay nahatonga azy io ho vokatra mahaliana. Raha ny marina dia sarotra tamiko ny nahita teboka ratsy satria tsy fitaovana ampitahako azy.
Mazava ho azy fa IKEA dia hanelingelina antsika na ho ela na ho haingana ny vokatra iray amin'ny bazaar an-trano mifandray, ary ny fandrosoana vao haingana dia tena tsara tokoa. Eto izahay dia nanana jamba mahavariana KADRILJ ary tsy afa-po kokoa.
Fikarakarana lehibe Satria raha mividy iray ianao dia hametraka azy ireo manerana ny trano, indrindra raha manana ny lisitry ny vokatra mifanaraka amin'ny protokol Zigbee izay ananan'ny IKEA ao amin'ny magaziny ary mazava ho azy fa ny mora indrindra eny an-tsena amin'ny resaka sandam-bola.
KADRILJ jamba avy any IKEA> BUY
Multimédia sy fialamboly
Manomboka amin'ny zavatra tsy isalasalana fa ny vokatra automatique automatique tsara indrindra eto an-trano izay nosedraina tamin'ny taona 2020, raha ny marina Toa ahy amin'ny ankapobeny ny vokatra teknolojia tsara indrindra nandalo teto tamin'ny taon-dasa, miresaka momba ny Sonos Arc isika.
Sonos Arc dia tokony ho tsy isalasalana fa ny mpifanandrina handresy ao anaty bara feo, Manana ny fahaizany miovaova, feo isan-karazany premium, fifandraisana ary endri-javatra marani-tsaina. Sonos dia nanandrana indray ny bara fanamafisam-peo miaraka amin'ny Arc-ny ary ho mafy ny hanery azy ireo hijoro amin'izany.
Ankehitriny dia miresaka kely momba ny headphones izahay, raha mazava ny momba ny fandehanana any amin'ny faritra "ambony" faran'izay betsaka, ny tsara indrindra notsapainay tamin'ny taona 2020 dia ny Huawei FreeBuds Pro, tsy misy isalasalana.
Na izany aza, niditra tamin'ny vokatra tsara / vidiny izahay toy ny Xerior by X avy amin'i Kygo izay manana ANC ihany koa ary feo mahatalanjona.
Ankehitriny dia mitodika any amin'ny vokatra iray hafa izahay izay toa tena kilasika sy tsy tokony hanjavona ao an-tranonao, indrindra raha te hampiasa amin'ny fahita lavitra ianao. Ny Amazon Fire TV Cube no vokatra boribory kokoa hametrahana ivon-haino aman-jery tsara ao an-tranonao ary amin'ny vidiny antonony.
Na izany aza, tsy tokony avelanao ao ambadiky ny Amazon Fire TV Stick, vokatra iray hafa amin'ny vidiny saika tsy azo resena izay manao izany ihany, fa amin'ny hery kely kokoa ary mazava ho azy miaraka amina vahaolana feno HD.
Farany dia mamporisika ny Kobo Nia izahay, iray amin'ireo eReaders tsara indrindra amin'ny vidiny antonony izay nodinihinay tato ho ato. Izy io dia mifaninana mivantana amin'ny Amazon Kindle fototra izay nodinihintsika koa teto tamin'ny fotoana maromaro.
Manantena izahay fa tianareo ny tolo-kevitray miantsena amin'ny Andron'ny mpifankatia ary aza adino fa ao amin'ny Actualidad Gadget dia eto foana izahay manampy anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny Valentine teknolojia
Ahoana ny fanesorana ny mari-drano amin'ny sary amin'ireo programa ireo